:Bọchị: Jenụwarị 6, 2020
Imekorita ya na TÜVASA Pro maka Sakarya Light Rail System project
Ekrem Yüce, onye isi obodo nke obodo Sakarya na ndị isi obodo, bịara ndị isi TÜVASAŞ wee mee nkwado na usoro ụzọ ụgbọ oloko nke ezubere iji wuo na Sakarya. Mayor Yüce kwuru, ası Eziokwu na nnukwu ụlọ ọrụ dịka TÜVASAŞ dị n'obodo anyị na-agwa anyị. [More ...]
P & O FERRYMASTERS Uto ekpebie ka Turkey na Middle East
P & O fferrymasters taa, n'ihi na nke pan-European lọjistik ọrụ na Turkey iso ya mgbasa na Asia na-esote afọ abụọ, ọ ka a mara ọkwa na atụmatụ na-emeghe ise ọhụrụ itieutom. P&O Ferrymasters, na mgbakwunye na ntọala ya dị na Istanbul, [More ...]
Ozi si ndị ọrụ Ankara Sivas Railway
Ankara-Sivas n'etiti awa abụọ na nkeji iri atọ ga-ebelata ụzọ Silk Road 2 Km n'etiti ọrụ Ankara-Sivas YHT na-aga n'ihu na-agba ọsọ. Ankara Sivas YHT oru 30 mmadu 405/300 ehihie na abali [More ...]
Ọnọdụ ejighị n'aka na-aga n’ihu n’ọdụ ụgbọ okporo ígwè Samsun Sivas .. ingbọ Ule ma ọ bụ Nnyocha?
Onye isi oche TCDD na ndị nnọchianya na-eso ụgbọ oloko soro ha na elekere 09.00:21 nke ụtụtụ site na Samsun ruo Sivas (Thick) gawara. The nchoputa nke Great Ndú Mustafa Kemal Ataturk Republic of Turkey on September XNUMX, [More ...]
Ekrem Imamoglu, onye isi obodo nke Obodo isi obodo Istanbul, gara nleta na Bagcilar. İmamoğlu zara ajụjụ ndị odeakụkọ banyere ajaala ajụjụ ya n'oge nyocha ya na Bağcılar. Imamoglu, ndị nta akụkọ, Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan [More ...]
TÜVASAŞ National Train Project Injinia Nweta Nnyocha Nleba Anya!
Turkey n'ụgbọala Industry Corporation (TÜVASAŞ) n'okpuru National Railway Project oruru isonye na onu nnyocha na-aga ime ga-n'ọrụ, onu udomo oro ụbọchị, ugboro na ebe nke ọnụ ụzọ ule maka akwụkwọ [More ...]
A na-eme ememe Sledge na Ordu Plateaus
Obodo Ordu mepere emepe iji meziwanye otutu egwuru-egwu na igba-otutu n’ime obodo n’obodo Ordu haziri ememme n’emeghe uzo ato. Ememe a na-eme mkpọtụ nke ndị isi obodo mepere emepe ma na-eme maka oge mbụ na Ordu; [More ...]
Ezi Iche Ndi Nwanyi Ndi Ndi Nwanyi na Muğla
Onye isi obodo nke Muğla Obodo ukwu Site na ntuzi aka nke Osman Gür givenn nyere, etinyere ngwa 'Iche Nkpa oke na ụmụ nwanyị na ingbọ njem'. N'ime oke ngwa a, ụmụ nwanyị nọ na Muğla bụ oge 22.00 na oge oyi na 06.00 n'oge ọkọchị. [More ...]
Ejiri ọkụ ọkụ ọkụ LED awụnyere na nkwụsị Indoor na Sakarya
A na-etinye sistemu ọkụ na LED na nkwụsị ihu ọha maka ndị na-eji ụgbọ njem ọha. N'ụzọ dị otú a, ụmụ amaala ga-enwe ike ichere ụgbọ ha n'ụzọ dị nchebe na nke ọma. Ngalaba Transportgbọ njem Obodo Sakarya [More ...]
Onye isi ala Erdoğan kpọsara Ọwa Istanbul
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan kwuru okwu banyere Kanal Istanbul na mgbasa ozi nkwukọrịta nke CNN TNNRK-Kanal D. Oğ Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịchọta ego, anyị ga-eji ego obodo anyị mee ya, Erd Erdogan kwuru maka atụmatụ Kanal Istanbul. ọwa [More ...]
Egosiwo Logo Localgbọala Obodo
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan kwuru na akara ụgbọ ala mpaghara ahụ bụ “tulip ında na mmemme“ Nkeonwe na Onye isi ala Kanal na mgbasa ozi nkwonkwo Kanal D, CNN Türk. Turkey si Erdogan jụrụ ya otú inwale ụgbọ ala, "mbụ enyi [More ...]
Sapanca Cable Car na-eweta Ọnwụ! Ndị nche ga-aga n’ihu ruo mgbe a ga-akagbu ọrụ ahụ
Mgbalị a na-emegide ụzọ nke ndị bi na Kırkpınar Negbe dị na Sapanca district nke Sakarya na-aga n'ihu ụbọchị 120. Dịka Hazal Ocak sitere na Akwụkwọ akụkọ Cumhuriyet; Ndị bi n'ofe ọdụ ụgbọ ala USB ruo Afọ Ọhụrụ [More ...]
Nnwale Ugbo Ogbe ‘Dute’ Ejiri
Onye Minista nke Industrylọ ọrụ na nka na ụzụ Mustafa Varank, Afyonkarahisar Iscehisar Marble Specialized Organised Organisation Mpaghara (OIZ) hụrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Onye isi ala Varank, n'ime oke nleta ya Demmak Demireller Machines Trade na Trade Inc. [More ...]
Nkwado maka "Ọgbọ Dị Ukwuu Ga-agafere Düzce" Mgbasa Ozi Mbinye aka nke Düzce City Council nwanyị mere na ebe a na-ere ahịa n’ụbọchị ikpeazụ nke 2019 na-abawanye. Odi ihe dị ka puku puku iri anọ n’ime ụbọchị iri anọ na anọ [More ...]